Jowhar.com : Somali Leader News - News: Meydka Allaha u naxariistee Maxamed Suleymaan Tubeec oo saakay lagu aasayo Muqdisho
April 24 2014 22:16:23
Meydka Allaha u naxariistee Maxamed Suleymaan Tubeec oo saakay lagu aasayo Muqdisho
Qaban qaabada aaska Meydka Allaha u naxariistee Maxamed Suleymaan Tubeec ayaa saaka lagu wadaa in lagu aaso magaalada Muqdisho, iyadoo diyaarada sida meydkiisa ay goor dhow soo caga dhigan doonto garoonka diyaaradaha Aadan cadde.
Garoonka diyaaradaha ayaa waxaa ku sugan mas'uuliyiin ka tirsan labada gole, oo uu hogaaminayo Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo wasaaradiisa aad u waday qaban qaabada aaska.
Ehelada Marxuumka oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa iyana garoonka ku sugan, sidoo kale Fanaaniin iyo dadweyne soomaaliyeed ayaa garoonka ku sugan, iyadoo la filayo in salaada janaaso lagula dukado halkaas.
Ku simaha Madaxweynaha ahna Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof. Jawaari ayaa shalay sheegay in Meydka boqorkii codka Maxamed Suleymaan Tubeec lagu aasi doono magaalada Muqdisho.
Waxaa horay u soo baxayay warar sheegayay in meydka Marxuum Maxamed Suleymaan lagu aasi doono magaalada Ber-bera, iyadoo Xukuumada Somaliland ay gudi u saartay, hase ahaatee lama oga wax is bedelay, inkastoo warar qaar ay sheegayeen in fanaanka uu dalbaday in Muqdisho lagu aaso.
Allaha u naxariistee Maxamed Suleymaan Tubeec oo todobaadkii hore ku geeriyooday Isbitaal ku yaal Jarmalka ayaa ka mid ahaa Fanaaniinta loogu jecel yahay ee udub dhexaadka u ahaa Fanka Soomaaliyeed, waxaana u baxday naaneysta ah Boqorka Codka.
mahad on March 16 2014
0 Comments · 2141 Reads
Jowhar.com751,322 unique visits